Messi Wuxuu Naga Caawin Doonaa Inaan Taariikh Sameeyno, Ayuu Yiri Al- Khelaifi – Garsoore Sports
Messi Wuxuu Naga…
Messi Wuxuu Naga Caawin Doonaa Inaan Taariikh Sameeyno, Ayuu Yiri Al- Khelaifi
Nasser Al-Khelaifi ayaa dareensan in PSG ay soo ururisay koox awood u leh inay taariikh sameysato kaddib markii ay ku dhawaaqeen saxiixa Lionel Messi.
Lionel Messi ayaa ka caawin doona Paris Saint-Germain inay taariikh sameyso, sida uu sheegay guddoomiyaha kooxda iyo madaxa fulinta Nasser Al-Khelaifi.
PSG ayaa xaqiijisay saxiixa Messi kaddib markii weeraryahanka uu ku guuldarreystay inuu heshiis cusub la gaaro kooxdii uu 18ka sanno ku sugnaa ee Barcelona, kuwaasoo la daalaa dhacaya dhibaatooyin dhaqaale xilli ay maadaama ay xeerar adag kala kulmeen LaLiga.
34 jirkaan ayaa u dhaqaaqaya Parc des Princes isagoo dhaliyay 672 gool 778 kulan oo uu u saftay kooxdiisii hore wuxuuna sii xoojinayaa tayada qotada dheer ee PSG ee weerarka.
Kaddib markii ay xaqiijiyeen imaanshaha Messi Talaadadii, Al-Khelaifi ayaa yiri: “Waan ku faraxsanahay in Lionel Messi uu doortay inuu ku biiro Paris Saint-Germain waana ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno isaga iyo qoyskiisa magaalada Paris.”
“Ma uusan qarin rabitaankiisa ah inuu sii wado u tartamidda heerka ugu sarreeya iyo ku guuleysiga koobab, dabcan rabitaankeena koox ahaan waa inaan sidaas oo kale sameyno.”
“Ku biirinta Leo ee kooxdayada heerka caalami ah ayaa ka dhigan suuq kala iibsi oo aad guul badan islamarkaan istiraatiiji ah. Waxaa hogaaminaya tababaraheena aadka u fiican iyo shaqaalihiisa, waxaan rajaynayaa in kooxda ay taariikh u sameeyso taageerayaasheena adduunka oo dhan. ”
Messi ayaa ku biiraya saaxiibkiisii hore ee Neymar xilli uu isku diyaarinayo inuu dhammeystiro seddax weeraryahan oo halis ah marka uu la safto xiddiga reer Brazil ee Neymar iyo xiddiga Faransiiska ee Kylian Mbappe.
Saxiixyada Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma iyo Georginio Wijnaldum oo uu wehelinayo Achraf Hakimi ayaa xoojinaysa kooxda Mauricio Pochettino, laakiin tallaabada taariikhiga ah ee ay kula soo saxiixdeen Messi ayaa PSG gaarsiin karta heer kale.
RASMI: PSG Oo Ugu Dambeyn Soo Bandhigay Lionel Messi
Muuqaal: Daawo Soo Bandhigidii Messi Iyo Shirkiisii Jaraa’id